IJamaica ilungele iintlanganiso ezibalulekileyo neKhanada kunye nabalingani baseMelika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica ilungele iintlanganiso ezibalulekileyo neKhanada kunye nabalingani baseMelika
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica kunye nezeMali kunye neJHTA yokuChaphazeleka kwe-COVID-19 kuBasebenzi bezoKhenketho
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, kunye namanye amagosa aphezulu kwezokhenketho, bazakuthatha inxaxheba kuthotho lweentlanganiso kwiimarike ezimbini ezinkulu zesiqithi, i-United States ne-Canada, ukuqala ngomso, kumzamo wokunyusa abafikayo ukuya kwindawo ekuya kuyo kunye nokukhuthaza utyalomali kwicandelo lokhenketho.
Isiqithi saseJamaica sisebenzela ukujongana nomceli mngeni wokuhla kohambo ngenxa yomsinga wesithathu we-COVID-19.
I-CDC ikwadwelise ilizwe njengeNqanaba 4 ngokuba namanqanaba aphezulu kakhulu e-coronavirus.
Ezi ntlanganiso zicwangcisiwe ngenjongo yokuqinisa amaqabane ezokhenketho ukuze baqhubeke nokuthengisa indawo ekuyiwa kuyo.
UBartlett uqaphele ukuba olu hambo lubaluleke kakhulu, njengoko idatha efunyenwe liSebe ibonisa ukuba ibango lokuya eJamaica liwe kwiintsuku ezisi-7 ezidlulileyo. Ukholelwa ekubeni “oku kubangelwe yimiceli mngeni ebangelwe kukutshangatshiswa kwesithathu kwe-COVID-19 echaphazela esi siqithi, kunye namaZiko aseMelika okuLawula nokuThintela (i-CDC) okuhlelwa kwinqanaba leNqanaba 4, elinikwe iJamaica amanqanaba aphezulu e-COVID-19. ”
"IJamaica ihlala yindawo ekhuselekileyo kwaye sifuna ukuqinisekisa umdla wethu wezokhenketho woku. Into ephambili ziiPaseji zoKhuseleko lwezoKhenketho, ezinesifo esiphantsi sosulelo esingaphantsi kwe-1%. Imveliso yethu ihlala yomelele kwaye inyani engqondweni, ngaphandle kwemiceli mngeni. Sizakuqhubekeka ukuqhuba amalungiselelo entengiso ukunciphisa ukucutha okunokubakho, utshilo uBartlett.
Uthotho lweentlanganiso zicetyelwe ukubandakanya amaqabane ezokhenketho, amajelo eendaba kunye nabanye abathathi-nxaxheba eMelika nase Canada, ukuqinisekisa nokuqinisa ukuzithemba kwiiprojekthi zabo zotyalo-mali eziqhubekayo kunye nentengiso yendawo ekuyiwa kuyo.
UMphathiswa, osishiye namhlanje esi siqithi, ekunye noMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; Usihlalo weBhodi yezokhenketho yaseJamaica, uJohn Lynch, kunye neQhinga loPhezulu kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright, bazakudibana nabatyali zimali bezokhenketho.
Ngelixa e-United States, iqela lamagosa ezokhenketho nawo acwangciselwe ukudibana nabaphathi be-American Airlines kunye ne-Southwest Airlines. Baza kudibana namagosa avela kwimigca ephambili yokuhamba ngenqanawa enje ngeRoyal Caribbean kunye neCarnival kunye nabaphathi abavela e-Expedia, Inc., eyona arhente inkulu yokuhamba nge-Intanethi emhlabeni, inkampani yesithathu ngobukhulu yokuhamba e-US, kunye neyesine ngobukhulu inkampani ehlabathini.
Ezinye iintlanganiso eCanada ziya kugxila kwintengiso kwaye ziya kuthabatha onke amaqabane aphambili kubandakanya neenqwelo moya, ezinje ngeAir Canada, WestJet, Sunwing, Transat kunye neSwoop. Ngokunjalo, baya kudibana nabaqhubi bezokhenketho, abatyali zimali bezokhenketho, urhwebo kunye neendaba eziphambili kunye nabathathi-nxaxheba abaphambili beDiaspora.
“Sifuna ukuqinisekisa amaqabane ethu, kunye neendwendwe zethu ukuba senza konke esinako ukuqinisekisa ukuba utyelelo lwabo kwesi siqithi luya kuba lolukhuselekileyo. Iiprotokholi zethu zimiselwe ukuqinisekisa ukuba uzokwazi ukutyelela iindawo zethu ezinomtsalane kwaye ube namava anyanisekileyo aseJamaican, kodwa ngendlela ekhuselekileyo nengagungqiyo, utshilo.
“Besisoloko sibambezela iinzame zokuqinisekisa ukuba abasebenzi bezokhenketho bagonywe ngokupheleleyo kwaye babone impumelelo enkulu kweli phulo. Ke ngoko, unokuqiniseka ukuba iindwendwe zikwindawo ekhuselekileyo. Ngapha koko imigangatho yethu yokhuseleko kunye neeprotokholi zibhiyozelwa kakhulu kwihlabathi liphela kwaye zibalulekile kuthi ukuze sikwazi ukwamkela iindwendwe ezingaphezu kwesigidi oko savula imida yethu, utshilo uBartlett.
UMphathiswa uBartlett kunye namanye amalungu eqela acetyelwe ukuba abuyele Jameyikha ngo-Okthobha 3, 2021.